I-Android: indlela yokwabelana ngendawo yakho kunye nokulungelelaniswa kwegps
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android: Ungabelana njani ngendawo okuyo kunye nokulungelelaniswa kweGPS
I-Android: Ungabelana njani ngendawo okuyo kunye nokulungelelaniswa kweGPS
Sipapashe inqaku elihlaziyiweyo malunga nesi sihloko. Ungayifunda Apha .
Nantsi imeko osenokuba unamava kuyo, njengoninzi lwabantu abahlala kwiplanethi: ukule ndawo ipholileyo kwaye ufuna ukumema iqela labahlobo, kodwa ukubanika umkhombandlela kwifowuni kungqina kunzima njengokufundisa ikati ukukhonkotha. Okanye usendleleni eya kwindawo yokuhlangana kwaye ufuna ukuba omnye umntu agcine indawo okuyo, ukuze bazi xa sele uza kufika.
Uyenza njani loo nto ngoncedo lwe-smartphone yakho? Ewe, njengakwezinye izinto ezininzi, kukho indlela engaphezulu kweyodwa yokwabelana ngokulungelelanisa nomnye umntu, kwaye kule ndlela-yokukhokela, siya kuchaza iindlela ezininzi zokwenza oko kwi-smartphone ye-Android.
Ubude bukaGoogle bakhiwe kanye kwiiMephu zikaGoogle, kwaye ngaphandle kokuba uyi-newbie ye-Android, sele uvile malunga nenqaku ngaphambili. Isicelo sikuvumela ukuba ubone indawo yabahlobo bakho kwimephu, kwaye ngokuchaseneyo. Indawo abakuyo inokujongwa kokubini kwisixhobo esiphathwayo, nokuba yi-smartphone okanye ithebhulethi, okanye kwikhompyuter ngonxibelelwano lwewebhu yeLatitude. Ngaba akukho nto iphosakeleyo? Nantsi indlela oyisebenzisa ngayo:
Kodwa leyo yenye yeendlela zokuxelela abantu ukuba uphi. Kwiphepha elilandelayo siza kukhupha ezinye izicelo eziluncedo ezimbini ezinokuthi zenze umsebenzi wenziwe.
Iphepha elilandelayo: Iphepha 2
zombie imidlalo yokusinda ye-android
kuthetha ukuthini ukungqinisisa
Ngaba ubusazi ukuba ungongeza ezinye iiapps kwiNdlela yokuGcina Amandla kwi-Galaxy S5?
I-T-Mobile yongeza iiplani ze-2GB zoKhetho ngokuLula kwi-Binge On, kodwa ngendlela elahlekisayo (UPHANTSE)
Indlela yokusebenzisa iLinux ukufumana umyalelo wokufumana iifayile
Ityala leeMidlalo zabaThengi be-Otterbox yeApple iPhone 6 Plus yoVavanyo
I-AT & T inikezela usetyenziso lwe-Push-to-Talk ye-Apple iPhone
Imidlalo ye-RPG eyi-10 ebalaseleyo ye-Android kunye ne-iOS
Iimpawu ze-12 zeNkokeli elungileyo ye-Agile